Iziboshwa zilungiselela ukubhala izivivinyo zikamatikuletsheni | Scrolla Izindaba
Iziboshwa zilungiselela ukubhala izivivinyo zikamatikuletsheni
Ziyi-19 iziboshwa ezisejele laseThekwini i-Westville ezizobe zibhala izivivinyo zikamatikuletsheni ezizayo.
Ngenkathi abafundi abayizinkulungwane bakamatikuletsheni eNingizimu Afrika belungiselela izivivinyo zabo futhi bebuyisa nesikhathi esilahlekile ngenxa ye-Covid-19, iziboshwa zithi sezikulungele ukubhala futhi selokhu zaviva kusukela kuqala uMfumfu.
UNhlakanipho Mbatha oneminyaka engama-25 ubudala wase-Clermont utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi ukufunda ejele bekungelula.
“Abantu abaningi bakholelwa ukuthi uma wenza izifundo zakho ejele konke kuhamba kahle. Kodwa lokho akulona iqiniso. Siphinde sihlangane nezinselelo.
“Abantu ovalelwe nabo esitokisini sakho abakwazi ukulawulwa. Kukhona nonogada abangahambisani nokuthi sifunde. Kodwa abanye bayasixhasa ngakho konke esidinga ukukufunda,” kusho uNhlakanipho, wengeza ngokuthi kuzo zonke izinselelo asebhekene nazo kodwa uyabonga ukuthi waphasa ibanga le-11 ngonyaka odlule.
Ugwetshwe iminyaka eyi-14 ejele ngokuduna imoto nomngani wakhe e-New Germany. Uthe, usejahe ukuphuma ejele ngemuva kokuthi adonse isigamu sesigwebo sakhe ngowezi-2025.
“Angikaze ngiphumele ngaphandle selokhu ngaboshwa ngowezi-2016. Ngakho-ke uma ngiphuma ngifuna ukufundisa intsha izindlela ezilula zokufunda izibalo.
“Sikhule sicabanga ukuthi izibalo zenzelwe abantu abathile kodwa lokho akulona iqiniso futhi yilokho enginethemba lokukufundisa intsha yakuleli,” kusho uNhlakanipho, wengeza ngokuthi uma ephasa umatikuletsheni, usazoqhubeka nezifundo zakhe kwi-mathematics aze abe neziqu zobudokotela.
Uthishanhloko weskole sasejele i-Usethubeni Youth School uNelly Mkhize uthe, bebethola amaphesenti ayi-100 wokuphasa kwabafundi bakamatikuletsheni ngamalengiso e-Westville kule minyaka emihlanu edlule, futhi banesiqiniseko sokuthi bazothola amaphesenti ayi-100 kubafundi bakamatikuletsheni wakulo nyaka.
Zibalelwa kuma-34 iziboshwa ezizobe zibhala izivivinyo zazo zikamatikuletsheni emnyangweni wezokuhlunyeleliswa kwezimilo KwaZulu-Natali mhlaka zi-15 kuLwezi.